धेरै दिनसम्म मोटरसाइकल थन्क्याउनु भएको छ भने अब स्टार्ट गरिहाल्नुहोस् ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/धेरै दिनसम्म मोटरसाइकल थन्क्याउनु भएको छ भने अब स्टार्ट गरिहाल्नुहोस् !
देशभर अहिलेसम्म ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ वटा सवारी दर्ता भएका छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको संख्या २५ लाखभन्दा बढी छ । यातायात व्यवस्था विभागमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म देशभर २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । तर लकडाउनले गर्दा यतिबेला यीमध्ये धेरै मोटरसाइकल पनि थन्किएर बसेका छन् ।लामो समयसम्म मोटरसाइकल नचलाउँदा इन्जिन लगायत अरु पार्टपूर्जामा खराबी आउन सक्छ ।